Apps ka Android dirto oo meel kale ku One Click
Sidee si ay u gudbiyaan Apps ka Android inay Android kale
1 Transfer in Android
iPhone Xiriirada in ay Android
iPhone SMS si ay Android
iPhone in Android
Music Lugood in Android
Lugood Movie in Android
Music iCloud in Android
iPod in Android
iPad in Samsung
Mac Music inay Android
WinPhone in Android
ZTE si ay Android
Blackberry in Android
Xiriirada Blackberry in Samsung
Symbian in Android
Huawei in Android
HTC in Samsung
Muuqaalka Xiriirada in ay Android
PC in Nexus
Music ka PC in Android
Videos ka PC in Android
Bedelka Android Xiriir
Bedelka Android Data
Android Import Xiriir
Bedelka Android Music & Video
2 Transfer ka Android
Xiriirada Android inay iPhone
Music Android inay Lugood
Music Android inay iPhone
Xiriirada Android inay Samsung
Samsung Xiriirada Transfer
SMS Android inay Android
Galaxy si PC
Android inay iPhone
Transfer Android Apps
Android Apps File Transfer
Transfer File WiFi Android
Android Transfer File Wireless
Softwares Transfer Phone
Bedelaada File Android
Transfer Alternative Android File
Transfer File Samsung
15 Wareejinta Samsung
Transfer Data Phone
Sidee si ay u gudbiyaan Apps in Your Phone New (ay ka mid yihiin Andorid iyo macruufka Devices)
Waxaa jira waqtiyo aad u baahan tahay si ay u gudbiyaan barnaamijyadooda ka mid phone in kale. Waxaa laga yaabaa in aad soo iibsatay phone cusub oo aadan rabin inay la daadiyo ama aadan rabin in ay u leeyihiin in ay soo bixi Chine ee Tanzania. Kala beddelashada barnaamijyadooda uusan heysan in ay ku adag tahay oo dhan. Waxaad ku samayn kartaa si aad u fudud haddii aad qabtid qalabka midigta iyo tan ogaada-sida saxda ah. Bal aynu eegno siyaabo kala duwan oo aad barnaamijyadooda aad ka Android inay iPhone ama xataa iPhone in Android, iPhone in Android wareejin karaan.
Qaybta 1. Apps beddelashada ka Android inay Android
Qalab ugu fiican si ay u isticmaalaan si ay u gudbiyaan barnaamijyadooda ka mid qalab Android in kale Wondershare MobileTrans. Qalabkani waxa uu kaa caawinaysaa in aad hesho barnaamijyadooda aad oo keliya ma aha, laakiin dhammaan xogta ay ka mid yihiin xiriirada, fariimaha qoraalka ah, sawiro, jadwalka taariikhda, music iyo xitaa videos ka mid qalab android si kale oo dhan ee hal click.
Ka sokow, waxay fududaysaa in aad si ay u gudbiyaan u dhexeeya qalabka Android iyo macruufka iyo taageero qalab ka badan 2000. In ka badan taleefanka si ay u kala iibsiga telefoonka, sidoo kale waxa aad isticmaali karto si gurmad iyo soo celinta xogta aad telefoonka ee. Just siin go a.
Wondershare MobileTrans - 1-Guji Phone in Transfer Phone
Transfer Phone 1-Click, 100% Safe iyo Risk-free
Xiriirada Transfer ka Android inay Android
Bedelka Messages ka iPhone si iPhone
Macruufka Support, Android, WinPhone iyo Symbian
Macluumaadka telefoonka ee kaabta in computer
Soo Celinta kaga imaanayo in Tayada sameecadda
Si joogto ah masixi Your Old Android Phone
Sidan in la sameeyo kala iibsiga isticmaalaya Wondershare MobileTrans.
Talaabada 1: Download oo ay maamulaan Wondershare MobileTrans
Waxa ugu horreeya ee aad u baahan tahay inaad samayso waa download iyo ordi software Wondershare MobileTrans ka dibna ku xidha laba Phones Android inay your computer iyadoo la isticmaalayo fiilooyinka USB.
Talaabada 2: Dooro Phone in ay Xulashada Transfer Phone
Si aad u samayn click this on Qalabka Super Tab on sare ee daaqadda. Markaas Riix Transfer Phone iyo dooran Phone in ay doorasho Transfer Phone. Waxaa laga yaabaa inaad u baahan tahay inaad fiirisaa "data Clear" sanduuq ka hor inta aanad nuqul ah haddii aad rabto in aad u faaruqiso phone Ahaado.
Talaabada 3: Kobigareynta Bilow
Iyadoo software Wondershare MobileTrans ah, aad nuqul kartaa dhammaan xogta ay ka mid yihiin xiriirada iyo fariimaha. Laakiin haddii aad dooneyso in aad nuqulka barnaamijyadooda aad, uncheck oo dhan sanduuqyada kale oo ka dibna riix Transfer. Ka dhig labada telefoonada ku xiran inta lagu jiro hanaanka wareejinta. Markii geeddi-socodka waa dhameystiran click OK iyo waa in aad si guul leh loo wareejiyay barnaamijyadooda si aad u qalab cusub Android.
Qaybta 2. Kala beddelashada barnaamijyadooda ka iPhone si iPhone
Haddii aad rabto in lagu wareejiyo xogta ay ka mid yihiin barnaamijyadooda ka hore iPhone in mid cusub, waxaad isticmaali kartaa iCloud ama Lugood. Halkan tallaabo hagitaan talaabo talaabo ah oo ku saabsan sida loo isticmaalo labada habkan.
1. Isticmaalka Lugood
Talaabada 1: Download iyo rakibi nooca ugu dambeeya ee Lugood on your computer. Burcad codsiga Lugood ugu on your computer iyo xirmaan jir iPhone ah in aad damisid isticmaalaya fiilooyinka USB. Lugood ogaan doonaa qalab aad oo ay muujiyaan hoos AALADAHA.
Talaabada 2: Riix magaca jir iPhone oo guji kaabta Hadda sida qaybta hoose ee image kor ku muujinaya.
Tallaabada 3: Marka geedi socodka Back-up dhameystiray, barkinta hore iPhone iyo xirmaan mid cusub.
Talaabada 4: Marka Lugood Aqoonsanaya cusub iPhone, Riix soo celin kaabta ka dibna dooran file hore iPhone aad ka hor ilaa ay taageerayaan oo soo Celinay telefoonka cusub. Taasi fudud, waa in aad xogta oo dhan oo ay ku jiraan gurmad Chine in ay telefoonka ku cusub.
2. Isticmaalka iCloud
Si aad u isticmaasho iCloud si ay u gudbiyaan barnaamijyadooda si aad iPhone cusub, waxaad u baahan doontaa inaad gurmad xogta si aad u iCloud. Haddii aad adiga oo isticmaaleya isticmaale iPhone, aad ogtahay in iCloud si toos ah gurmad doonaa xogta ku saabsan telefoonka si toos ah. Xataa haddii ay taasi dhacdo, waxa wali muhiim ah in aad sameyn buug dib si ay u barnaamijyadooda iyo macluumaad kale oo la wareejiyo phone cusub. Halkan sidii ay u samayn iCloud gacanta dib.
- Tubada Settings & Cloud on hore iPhone
- Markaas Tubada on Kaydinta & kaabta
- Daar ee kaabta iCloud ah
- Tubada on Back ilaa Hadda
Marka nidaamka kaabta la buuxiyo, waa in aad leedahay raad raac ah oo ku saabsan iCloud diyaar u ah inay lagu wareejiyo aad telefoon cusub.
Dami jir iPhone si aanay u keeni khilaafaadka la hayaan iCloud ah. Daar iPhone cusub oo markaas garaac Soo Celinta ka kaabta iCloud ka dib samaynta telefoon cusub dabcan.
Waa in aad aragto liiska hayaan. Mid ka mid ah ka aad telefoon jir Dooro iyo guji soo celi. Marka geedi socodku waa dhameystiran, cusub iPhone bilaabi doonaa oo waa in aad haysatid oo dhanba barnaamijyadooda aad si guul leh ku wareejiyo.
Qaybta 3. Kala beddelashada barnaamijyadooda ka Android inay iPhone ama iPhone in Android
Run ahaantii Ma jiro wax si toos ah si ay u gudbiyaan barnaamijyadooda aad ka iPhone in Android iyo qeybsanaan ku xigeenka. Habka keliya ee lagu heli Chine oo dhan waa in ay mar kale dib u soo dejisan oo dhan oo iyaga ka mid. Waxaa kaloo muhiim ah in la ogaado in marka laga reebo qaar ka mid ah app aad loo jecel yahay, waxaa laga yaabaa in aad in aanay awoodin in ay helaan wax u dhigma Android ee app macruufka ah iyo qeybsanaan.
Wixii barnaamijyadooda Android, Google Play waxa aad heli kartaa Google Play website on desktop ka dibna loo soo dajiyo barnaamijyadooda aad kala soo bixi halkan si aad u qalab Android adiga oo isticmaalaya isla Google Account. Haddii aadan rabin in la isticmaalo Google Play ama ma ka heli kartaa app ku haboon, isku day inaad soo socda suuqyada app Android.
Waxaa laga yaabaa inaad la yaabay si aad u ogaato in Appstore Amazon waxay leedahay in ka badan 240,000 oo Chine uu ka soo xusho sidoo kale app a free of feature maalintii. Booqo Appstore halkan http://www.amazon.com/mobile-apps
Appstore waxa uu leeyahay in ka badan 13,000 oo Chine oo u korayo sida aynu ka hadalno. Waxaa laga yaabaa inaad awoodo in la helo bedel wanaagsan in app iPhone ku aadan heli karin Google Play. Waxaad heli kartaa Samsung Galaxy Apps halkan http://seller.samsungapps.com
3. Opera Mobile Store
The Opera Mobile Store ayaa ka badan 200,000 oo Chine uu ka soo xusho oo uu helo ilaa 100 million oo soo booqda bishiiba. Waxaa laga yaabaa in meel wanaagsan oo laga bilaabi aad app raadinta. Waxaad halkan ka heli kartaa apps.opera.com/
Ha ogolaan in gebi Android Phones
Top 6 Android tirtirayaasha
Ha ogolaan in Android fog
3 Siyaabaha ay garab iCloud Lock
Messages iPhone kaabta
Bedelka Android Faylal ay la Cable USB ah
Soo Celinta ka kaabta iCloud
Download iCloud hayaan
Faylal ay kala soo wareegeen Android inay iPhone
Xogta laga iPhone dhaqaaq Android
Messages BlackBerry kaabta
Messages Android kaabta
Sidee si ay u gudbiyaan Xiriirada ka Samsung Galaxy S3 in S4
Sidee si ay u gudbiyaan Photos, SMS, Video iyo Xiriirada ka Symbian in Android
Ka Computer diro loona helo fariimaha qoraalka Android Si fudud
Sida loo saar Music on Samsung Galaxy S5
Sida loo kala iibsiga xogta ka Sony in Android
6 Features ugu farxada badan u Android 5.0 hurdiga ah ma Waxaad u ogaadaan
Si xor ah u isticmaal HTC nidaameed la Outlook, Google, Yahoo, Account HTC, Act Exchange
Top 10 Samsung Software ee kaabta iyo Apps Waxaad u
Sidee si ay u gudbiyaan Xogta laga Android inay Android
Sida loo Download Adobe Reader u Android
> Resource > Android > Sidee si ay u gudbiyaan Apps ka Android inay Android kale